စာအုပ်အမည် - The Ice Dragon
စာရေးသူ - George R. R. Martin
အတွင်းပုံများ - Luis Royo
ဘာသာပြန်စာအုပ်အမည် - ရေခဲနဂါး
ဘာသာပြန်စာရေးသူ - မျိုးဇော်ဝင်း
စာအုပ်တိုက် - ဇလပ်နီစာပေ မှ 2020 Jan ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်း
အမျိုးအစား - ဘာသာပြန်ဝတ္ထု(ရုပ်ပုံများပါဝင်)
စာမျက်နှာ- ၉၅ pages
အဖုံးဒီဇိုင်း - လင်းဝဏ္ဏ
• ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ အရင်ကထက် အလုပ်ပိုများလာတော့ စာဖတ်အား နည်းနည်းတော့ လျော့သွားသလား လို့ ပြန်တွေးမိတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ အချိန်ကုန်တာ များနေတာက စာဖတ်ချိန် လျော့စေတဲ့ အချက်ထဲ ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးတဲ့အထဲက တချို့ကို အညွှန်းရေးမယ်ဆိုပြီး မရေးဖြစ်တာတွေကလည်း အတော်များနေပြီရယ် ....
• ဒီလိုကာလမှာ ခုလို ကလေးနဲ့ လူငယ်ကြိုက်စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်နေတာတော့ သိပ်မဆန်းပါဘူး။ ရေခဲနဂါးကို ကလေးစာအုပ်လို့ သိရကတည်းက စိတ်ဝင်စားတာပါ။ G.R.R. Martin ကြီး ဘယ်လို ကလေးစာအုပ်ရေးမလဲဆိုပြီး ...
• ဝတ္ထုကတော့ ပါးပါးလေးရယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကလည်း ဇာတ်လမ်းကြီးထဲက Plot တစ်ကွက်စာလောက်လေးပေါ့။ အဒါရာဆိုတဲ့ ဆောင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေး။ ဆောင်းကောင်မလေးလို့ နာမည်တွင်ရတာက သူမ မွေးဖွားတဲ့ညက အအေးဓာတ်ဟာ သားအိမ်ကနေ သူမဆီကို ရောက်သွားရာက ဘယ်လိုဆောင်းရာသီကမှ မအေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တာမို့ အထက်က နာမည်တွင်ခဲ့တယ်။ အဒါရာဟာ နွေကို မကြိုက်ဘူး။ လူအများ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အရိုးကွဲမတတ် ဆောင်းရာသီကို သဘောကျသူ။
• ဇာတ်အိမ်ခင်းကျင်းရာဒေသက ရှေးတော်တော်ကျတဲ့ခေတ်ကာလ။ ဒေသတွေက အပြန်အလှန် စစ်မက်ပြုနေကြတယ်။ ဘုရင့်ဒေသနဲ့ တော်လှန်သူတွေပေါ့။ အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ လူတွေက နဂါးတွေကို ယဥ်ပါးအောင်လေ့ကျင့်ပြီး စစ်တိုက်ရာမှာ သုံးကြတယ်။ (ဆင်တွေ မြင်းတွေကို အသုံးချသလို ဖြစ်မှာပေါ့) အဲ့ဒီလို နဂါးတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးနဲ့ အစွမ်းအထက်ဆုံးက ရေခဲနဂါး။
• ဒီရေခဲနဂါးကို အဒါရာတစ်ယောက်ပဲ ချဥ်းကပ်လို့ ရတယ်။ စီးလို့ရတယ်။ ရေခဲနဂါးကို သူမ ပထမဆုံးအကြိမ် စီးခဲ့တာက ၅ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ။
• မူရင်းစာရေးဆရာအမည် 'G.R.R. Martin' ဆိုတာ နာမည်ကြီး GOT series နဲ့ လူသိများတဲ့ စာရေးဆရာကြီး။ ဘာသာပြန်သူ မျိုးဇော်ဝင်းဆိုတာလည်း လူငယ် ဘာသာပြန်ဆရာ။ Game of Thrones ကို ဘာသာပြန်တာ ၂ တွဲ (၃ အုပ်) ထွက်ပြီးပြီ။ ဒါက သူ့ရဲ့ ၄ အုပ်မြောက်။ ဘာသာပြန် အရေးအသားက ဖတ်ရှုရ ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်။
• ကလေးစာအုပ်တွေပဲ ရွေးပြီး အညွှန်းရေးနေမိသလားမသိ။ ဒီရှေ့မှာ လင်းခန့်ရဲ့ ကြမ္မာမုန်တိုင်း။ ကလေးစာအုပ်ဆိုပေမယ့် ဒါက ၁၀ နှစ် ဝန်းကျင် ကလေးတွေ ဖတ်ရင် သိပ်ကြိုက်မယ့် စာအုပ်။ မိဘတွေကလည်း ကလေးတွေကို ဖတ်ပြသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲ။
• ကလေးမဟုတ်လည်း ကိုယ့်လို ကလေးဖတ်စာပေတွေ၊ ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖန်တက်စီတွေ ကြိုက်တတ်သူတွေလည်း သဘောကျမယ့် စာအုပ်ပါ။ တစ်ခုပါပဲ။ Game of Thrones ဆရာကြီးရဲ့ စာအုပ်မို့ ဇာတ်အိမ်အကြီးကြီး ဇာတ်ကောင်အများကြီးနဲ့ အထူကြီးတော့ ဖတ်ရမယ် မထင်ပါနဲ့။ စာမျက်နှာ တစ်ရာ မပြည့်တဲ့ စာအုပ်မှာ ပုံတွေက စာမျက်နှာအားလုံးရဲ့ တဝက်လောက်ပါပါတယ်။ ပုံလေးတွေကြည့်ရင်း စာဖတ်တာ သဘောကျသူတွေဆိုရင် ကြိုက်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကို ဖတ်ပြသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။